Wasaaradda Waxbarashada oo Daah Furay Mashruuc Faa’iido u leh Ummadda
Hargeysa (Dawan):- Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo Sayniska Prof: Maxamed Faarax Xareed,ayaa si rasmi ah u daah furay wajiga afraad ee mashruuc ay ka faa’iidaysanayaan sadex wasaaradood oo kala ah wasaaradaha waxbarashada iyo sayniska,Beeraha iyo xannaanada xoolaha iyo kalluumaysiga.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo furitaankii mashruuca ka hadlay ayaa caddeeyay wejiga afraad ee mashruucani inuu ka waxtar badan yahay kuwii hore isla markaana laga faa’iidaysanayo caqabadihii laga bartay kuwii hoe.
Waxaa kale oo uu tilmaamay in mashruucani kuwii hore kaga duwan yahay in dadka reer guuraaga ah iyo barakacayaasha wax lagu barayo oo haddii markii hroee quudin iyo far barasho ay ku koobnaayeen kuwii hore in hadda la barayo dadka reer guuraaga ah iyo barakacayaasha xirfado ay ku shaqaysan karaan oo noloshooda wax badan ka tari doona.
Mashruucan oo ay maag gelisay African Educational Tras oo uu agaasimaha guud si rasmi ah shalay u daah furay,ayuu sheegay in uu muddo dheer socon doono isla markaana dad badan lagu bari doonoxirfado ay ku shaqaysan karaan rag iyo dumarba dadka barakacayaasha ah iyo reer guuraaga.
Agaasimaha guud oo arrimahaa ka hadlayaana waxaa uu yidhi “mashruucii hore faa’iido wixii laga helay iyo caqabado wixii ka yimiba waa la sheegay,imikana waxaan bilaabaynaa marshuuran afraadna,waxaanu kaga duwan yahay mashruucan afraad mashaariicdii hore waxay ku koobnaayeen quudinta barakacayaasha iyo in far barasho la barao iyo xisaab laakiin kan imika aynu daah furaynaa wuu ka duwan yahay oo dadka barakacayaasha ah iyo reer guuraagaba waxaa lagu barayaa xirfado ay ku shaqaystaan oo noloshooda wax badan ka tara waana mashruuc in badan soconaya oo laga faa’iidaysanayo.”
Agaasimaha guud oo hadalkiisa sii wata,ayaa intaa raaciyay. “mashruucan waxaa maal gelinaysa hay’adda Afrcan Edecational Tras oo aan aad ugu mahad naqayo oo waxyaabo badan ka taageerta wasaaradda waxbarasahda iyo sayniska mashruucanna waa mid muddo badan soconaya oo dad badan oo reer guuraa ah iyo barakacayaal ah wax loogu qabanayo isla markaana loogu barayo aqoon ay ku shaqaystaan oo nolol ahaan wax ku soo kordhiya noloshoodana kaabaya.wajiga afraad ee mashruucuna wuu inoo furan yahay.”
Waxaa kale oo furitaankii mashruucan ka hadlay agaasimaha waxbarasahda dadban Xuseen Daarood oo faah faahin ka bixiyay faa’iidooyinka mashruucani u leeyahay bulshada.
Masuul sare oo u hadashay hay’adda mashruucan maag gelisay ayaa sheegtyay in mashruucu uu socon doono muddo sannad ah isla markaana ay ka faaiidaysan doonaan dad badan oo beeralay,xoolo dhaqato iyo barokacayaal isugu jira.